Mpanamboatra sy mpamatsy an-tsokosoko an'ny China China Side Side Mirror PK9810 | Tetezana Andrefana
Ny fitaratra miverin-dàlana dia iray amin'ireo faritra ilaina amin'ny fiarovana ny vatan'ny fiara. High Quality PK9810 dia fitaratry ny kamio ho an'ny Hino & Isuzu FTR.SWB dia manana ny rafitra fizarana lozisialy momba ny lozisialy sy ny fividianana, ny varotra, ny fivarotana ary ny rafitra famatsiana. Nahavita 200 000 mahery izahay sokajy vokatra, ary ao anatin'izany ny faritra rehetra ao amin'ny kamio China.
Ny fitaratra miverin-dàlana dia iray amin'ireo faritra ilaina amin'ny fiarovana ny vatan'ny fiara. High Quality PK9810 dia fitaratry ny kamio ho an'ny Hino & Isuzu FTR.SWB dia manana ny rafitra fizarana lozisialy momba ny lozisialy sy ny fividianana, ny varotra, ny fivarotana ary ny rafitra famatsiana. Nahavita 200 000 mahery izahay sokajy vokatra, ary ao anatin'izany ny faritra rehetra ao amin'ny kamio China. Ny orinasanay dia nantsoina ho toy ny masoivohon'ny jeneralin'i Fujian ary mpaninjara amin'ny alàlan'ny marika malaza toy ny "FAW", "DFAC", "Sinotruk", "Shacman", "JAC", "Hongyan", "Auman", "Foton ", ary mpanamboatra singa mpampiantrano an-jatony malaza. Ny orinasanay dia mitazona ny tanjon'ny fanapariahana ny asa aman-draharaha. Miorina amin'ny fampandehananay ny tsenan'i Shina miorina amin'ny filaminana sy milamina, dia manadihady ny tsena ampitan-dranomasina izahay izao, mba hanompoana ny ilain'ny any ivelany ny faritra misy kamio, hanomezana tolotra fijanonana tokan-tena matihanina, fiarovana ary mahomby kokoa an'ny faritra kamiao China ho an'ireo mpanjifantsika vahiny.
FAMPIHARANA Hino & Isuzu FTR
Teo aloha: Fiara fitateran'ny kamiao PK9592
Manaraka: Fiara fitateran'ny kamiao PK9822